कुलमान घिसिङलाई रोक्न नेकपा नेताले लगाए ‘भारतीय एजेण्ट’को आरोप, जसले प्राधिकरण डुबाए उसैलाई ल्याउन पैसाको बलमा चलखेल तीव्र ! – Khabar PatrikaNp
कुलमान घिसिङलाई रोक्न नेकपा नेताले लगाए ‘भारतीय एजेण्ट’को आरोप, जसले प्राधिकरण डुबाए उसैलाई ल्याउन पैसाको बलमा चलखेल तीव्र !
August 24, 2020 51
Prevदुबई एयरपोर्टमा अलपत्र नेपाली लिन उड्यो जहाज दुबई एयरपोर्टमा खुशीयाली (भिडियोसहित)
Next४ करोडको साइकल !
भुलेर पनि प्रयोग नगर्नुहोस् यस्तो सिन्दुर, ऋणमा डुब्नसक्छन् पति….
२४ घण्टामा तीन हजार सात सय ४९ जनामा कोरोना देखियो २४ घण्टामा १९ जनाको ज्यान गयो !
उपत्यकामा २ हजार भन्दा बढी संक्रमित, तीनवटै जिल्ला प्रशासनले गरे कर्फ्र्युको तयारी